Ragga Sport Hoddies SX-2183
Qaabka Maya. SX-2183
Midabka: Madow / Lt.grey / Casaan
Baaxadda Range: SML-XL-XXL
Dhar: 70% cudbi 25% polyester 5% dhogor spandex, 260g
Ku xirid: jiinyeer caag ah, cajalad Herringbone, Hood drawcord
Faallooyin: Daabac daabac cinjirka ah oo laabta bidix iyo shaati-gacmeed ah, Googo & gogol dhejis garabka & gacanta ah, jeebka Kangaroo
Hoddies Ragga SH-965
Qaabka Maya Jeebka beenta ah ee jiinyeerka milicsiga ee qalinka + daabacaada milicsiga ee xabadka bidix. Dharka dhididka ee la moodo 1980s ayaa ah midka ugu caansan nolosha casriga ah ee dadka, sidoo kale wuxuu noqdaa dhar lama huraan u ah dharka ragga. Marka la eego ficil ahaan ...
Shaarka Polo Ragga ee SX-2349
Qaabka Maya. SX-2349
Baaxadda Range: SML-XL
Dhar: 100% muraayadaha cudbiga, 210g
Qalab: Badhanka caaga ah, Cajalad ku duuban, Flat-Rib
Faallooyin: Dhammaan daabacaadda + Dahab
Ragga Ciyaaraha T-shirt SH-693
Muuqaal: Hadalada Neefsiga leh: Daabacaad dhan-Funaanadda la daabacay waa farshaxan isku dhafan oo farshaxan iyo mood iyo saameyn diirran oo midab iyo qaab ah, taas oo muujineysa dhalinyarada iyo shakhsiyadda xayeysiinta. Naqshad fudud laakiin aan fududeyn waa funaanad run ah. Macno malahan waa shaati cad xagaaga ama dhididka xilliga jiilaalka, daabacaadda xarafka waa lama huraan. Naqshadeynta daabacaadda mawjadaha waddooyinka waxay badanaa ku saleysan tahay qaabka ama midabka leh dareenka kicinta. Bogga ...
Shaarka Polo Ragga ee SH-732
Qaabka No.: SH-732 Qalabka: Badhanka caaga ah, Cajalada la duubay, Flat-Rib Faalooyinka: Daabacaadda oo dhan + Xaraash Iyada oo caan ka tahay moodada ragga, Dharka Polo Ragga oo leh xaraf buuxa ayaa aad u sii badanaya. Da 'yarta Polo ayaa lagu tolay dhar leh dareen firfircoon oo indho qabasho leh sidoo kale soo celin xoog leh. Dharka dharka iyo dharka caadiga ah ayaa lagu qurxiyey qaybta ragga ee shaarka polo iyada oo loo marayo kala bixinta midabka, midab dhalaalaya oo midab leh iyo warqad daabacan. Hadday tahay tiirarka leh ...
Gaabyada Ragga B300155
Qaabka No.: B300155 Qalab: Laastik, Dulucda Hadallada: Daabacaadda cinjirka, Jeex jeex leh daabac dhabarka midig Mid ka mid ah waxyaabaha maalinlaha ah ee ugu caansan, gaagaabyada ayaa caan ku ah macaamiisha sanadka oo dhan. Dabaysha shaqeyneysa wali waa caan, isboorti dabacsan oo fudud ayaa muujinaya dareen xoog leh oo tusaalayaal ah, oo noqda walaac cusub. Marka la eego tikniyoolajiyadda, isku darka midabka iyo walxaha ayaa wali ah jihada waxqabadka ee naqshadeeyayaasha, taas oo sidoo kale siisa qaabka cusub hal-abuurnimo ...
Surwaalka dhaadheer ee ragga SH-973
Qaabka Maya saameynta, taas oo ah mid soo jiidasho leh sida waxqabadka quruxda badan ee ay soo bandhigeen wareegga. Qaabka yaabka leh ayaa ku habboon kooxaha macaamiisha yar yar. Kala bixida midabka adag ee kala firdhisani waxay siisaa surwaalada isboortiga muuqaal madax banaan oo dabiici ah ...
Ragga Ciyaaraha T-shirt SH-696A
Qaabka No.: SH-696A Midabka: Lt. cawl Xajmiga Xajmiga: SML-XL-XXL Fabric: 95% caag 5% elastane jacquard, 170g Feature: Xusuusin Neef leh: Daabac daabac
Ragga Ciyaaraha T-shirt SH-695
Ragga Ciyaaraha T-shirt SH-694
Ragga Ciyaaraha T-shirt SH-692
Funaanad Ragga 8807